Dzimwe nzira mbiri kuGoogle kuziva kwatakamira | Linux Vakapindwa muropa
Nekubvunza mubatsiri weGoogle iwe unosvika kuRoma. Ehezve, maseva ekambani anotora zvakanyatso cherekedza iwe zvawakabvunza, ivo vanozoenzanisa neGPS yefoni yako dai iwe waive, uye ivo vachakuitira iwe mazano mashoma kubva kune vamwe vavashambadzi vavo.
Ini ndanyora zvakati wandei pane ino blog nezve zvakavanzika zvinotyisa izvo zviri Android (Ini handisi kutaura nezve iOS nekuti handisati ndamboishandisa. Zvisinei, ini ndanga ndisinga zive chimiro. Ini ndiri mushandisi wemafoni ekupedzisira nekuti ini ndinongoshandisa nhare yekushandisa kubhengi (iyo inoramba kuve newebhusaiti. ) uye kugona kushandisa zvisingadzivisike WhatsApp Low-kumagumo zvinoreva iyo Go vhezheni yeApple iyo inoshanda zvakanyanya newebhu webhu.
Nekudaro, yangu mbozha yakafa uye muzukuru wangu akandipa Motorola G5 mune yakanaka mamiriro Uye, iyo G5 inotsigira izere vhezheni yeApple 8.1. Pakarepo ndakawana zvese zvaizivikanwa neGoogle nezvangu.
Rimwe zuva ndakatanga kugamuchira notices dzekupera kwemainvoice. Handina kumbobvunza mubatsiri kuti andizivise nezvazvo. Asi, sezvo ini ndanga ndashandisa Google account yangu kupinda mukati mawebhusaiti emakambani mamwe kuti ndione kuti ndine chikwereti chakadii, Google yakasarudza kundichengetera iro basa.
Pane imwe nguva ndakasaina kuti ndishande pamwe neMunharaunda maGuides, iro bhizinesi ruzivo ruzivo. Iye zvino ndinowana mamessage achibvunza kana ndaive mu "The Palace of the Degenerates" nekuti ini ndakafamba ndichipfuura pamusuwo.
Ndakafunga kuti ino inguva yakanaka yeGoogle uye neni kutora nguva yekusangana nevamwe vanhu (kana mune ino kesi mafomu)
1 Dzimwe nzira mbiri kuGoogle Mepu nepasi
1.1 Osmuye panzvimbo yeGoogle Mepu
1.2 Marble seimwe nzira yeGoogle Earth Pro
Dzimwe nzira mbiri kuGoogle Mepu nepasi
Osmuye panzvimbo yeGoogle Mepu
Yangu nguva dzose sarudzo yekuziva nzira yekubva panzvimbo A kuenda kunzvimbo B yaive BA Ndinoenda sei ikoko?, iko kushanda kwepamutemo kweHurumende yeGuta reBuenos Aires. Yakagadziriswa neasina mumwe kunze kwemusiki wePopCorn Nguva, zvinoenderana nemamepu eiyo OpenStreetMap chirongwa. Maguta mazhinji anoita zvimwechetezvo, saka zano rangu nderekutarisa ruzivo rwekushandisa zviri pamutemo kwenzvimbo yaunogara.
OpenStreetMap chirongwa chekudyidzana chekuvaka mepu yepasirese zvichienderana nekubatana kwevazvipiris. Muchokwadi, ini ndaive nemukana wekuyambira vagadziri ve BA Ndinoenda sei ikoko? yekukanganisa munzira yemugwagwa uye munguva pfupi ichiratidza kuti kururamisa kwakatove kwakapinzwa muchirongwa chemubereki. OSM inogona kuongororwa kubva pawebhu uye kune zvakare akawanda desktop uye nharembozha zvinoshandiswa zvinoshandisa mepu dzayo.
Mubrowser iwe une zvekutanga mabasa senge zoom in, zoom out, kufukidza mepu kana kuona nzvimbo yako.
Iyo yakanaka mepu kunyorera yekushandisa pane nhare ndeye OsmAnd. Zvichienderana neOverStreetMap uye Wikipedia, zvinokutendera kuti ufambe kunze kwenyika kuburikidza nemamepu akasiyana awakatora pasi.
Nezvinhu zvekufambisa zvemabhasikoro uye vanofamba, zvinopa ruzivo pamusoro penzvimbo dzekufarira, zviratidzo zvemugwagwa uye zvifambiso zvevoruzhinji. Inopawo gwara rekuongorora nemazwi akagadzirwa.
Tinogona kutsvaga masayiti nekero, zita, chinhu kana marongero
Marble seimwe nzira yeGoogle Earth Pro
Chirongwa ichi Icho chimwe chezvisingazivikanwe chaizvo zvishongo zveiyo KDE chirongwa. Iyo inoverengeka globe uye nyika atlas iyo zvakare inofambiswa neOpenStreetMap uye Wikipedia.
Iyo desktop vhezheni inokutendera iwe kusarudzar inomiririra segurobhu, atlasi, satellite, mugwagwa, kana topographic. Kero kana mapoinzi ezvekufarira anogona kutsvagiswa zvese online uye pasiri pamhepo. Pane iyo webhusaiti webhusaiti pane kutaura kweshanduro yeApple, asi haimo muchitoro cheGoogle uye hapana zvinongedzo kune zvimwe zvitoro zvekushandisa.
Marble inokupa iwe kugona kuisa ruzivo pamamepu senge mamiriro ekunze, zvine hukama neWikipedia zvinyorwa, zip kodhi, mapikicha, kana chaiyo-yenguva traffic ruzivo.
Izvo zvinokwanisika kuti hapana akavhurwa sosi svomhu dzinotsiva zvizere Google services. Asi, pasina kupokana kuvandudzika kwedu kwega kunopembedza kusanganisa akati wandei awo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Dzimwe nzira mbiri kuGoogle kuziva kwatakamira
federico fallabrino akadaro
chinyorwa chakanaka, tarisa mamapu ehupenyu, yakanaka kwazvo yakavhurwa sosi dandroid application inoshandisa openstreetmaps. Mufaro
Pindura kuna federico fallabrino
Cherekedza. Ndatenda neruzivo.
Yakanaka chinyorwa uye inobatsira kwazvo
Chinyorwa chinonakidza kwazvo. Ini ndaisaziva nezve OpenStreetMap.
Mhoroi, chimwe chinhu chakaipisisa mukuvanzika chawira mumaoko angu, moto 7 unobva kuAmazon. Zvandichaita sedanho rekutanga kuzviita degooglerize ndeyokuisa imwe rom uye kusava nehanya nekuiswa kweanoshamisa gapps. Wobva waisa F-Droid uye nayo, zvese zvinodikanwa zvekushandisa zvevamwe uye imwe data yemunhu kuti ubatanidze kune yangu Nextcloud. Chekupedzisira ndichaisa chromium ini ndinofungidzira nekuti nzira iri kutorwa naMozilla neFirefox handidi chero chinhu zvachose. Nei ndichitsanangura zvese izvi, nekuti iyo moto g G5 iri Bhedha rakanaka kwazvo rekuyedza kuita zvese zvandangotsanangura.
Isu tinofunga zvakafanana
Chinhu chekutanga chandinofanira kuve nechokwadi ndechekuti iwo maapplication maviri andinofanira kushanda nemabhangi anoshanda pamidzi midzi.